November | 2007 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ – မင်းမဲ့စရိုက်ူမန်မာူပည်
နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇
ယနေ့မနက်တွင် ၈၈ မျိူးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ် မိခင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သတင်းကြားရပါသည်။
ကဗျာဆရာ နွယ်စိမ်းဝေ က လူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့တွင် အောင်ဝေး ကဗျာ ကို ပရိသတ်သို့ ဝေခဲ့သဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရပါသည်။
မဂ္ဂင်ကျောင်းမှ သံဃာတော်များကို စစ်အစိုးရက လမ်းပေါ် နှင်ချပြီးနောက်၊ ၀င်ရောက် ကူညီ လက်ခံထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ရဟန်းသံဃာများ နှင့် ပြည်သူလူထုအားလုံးကို စစ်တပ်က တားဆီးခြိန်းခြောက်လျှက်ရှိသည်။
ဓာတ်ပုံ – ကမ္ဘောဒီးယားသွားတဲ့ နအဖ ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်ကို ကြိုဆိုနေကြစဉ် – အေဖက်ပီ
Posted by maungyit on November 30, 2007 in Local News Headlines
Posted by maungyit on November 30, 2007 in Overseas News
အရင်ြဉာဏိက – သပိတ်မြောက် ရဟန်းတော်မဵားသိုႚ
ယခုအခဵိန်အခၝသည် ဗုဒ္ဌအဆုံးအမတရားတော်မဵားကို ပိဋကကဵမ်းစာတော်လာအတိုင်း မနြ်မန်ြကန် ကန် ဟောေူပာညနြ်ုကားရန်၊ လေ့လာသင်ုကားရန်၊ ပြားမဵားအားထုတ်ိုိံင်ရန်ိံငြ့် ရဟန်းတော်မဵား၏ ဘ၀လုံ္ဘခြံမအြတက်ြပၝ အဆုံးရြားဆုံး အပိတ်အပင် အြေိာံင့်အယကြ် အခံရဆုံးအခဵိန်ူဖစ်ပၝသည်။
ပခုက္ကတြငြ်ူဖစ်ပဵက်ခဲ့သော ရဟန်းတော်မဵားအပေၞ ရိုင်းပဵစြာ ညငြ်းဆြဲိံပ်စက် ဖမ်းဆီးခဵပြ်ြေိာံင်မမြဵားမြ သည်ူမန်မိာုိံင်ငံ တနံတလဵား ရဟန်းတော်မဵား၏္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋဖော်ထုတ်ခဲ့မမြဵားကို အုကမ်းဖက် နည်းမဵာူးဖင့် ရိုက်ပုတ်ညငြ်းဆဲ၊ ကေဵာင်းတိုက်မဵားအတငြ်း အခဵိန်မတော် စီးနင်းဝင်ရောက်ကာ ရဟန်း တော်မဵာိးံငြ့် သံဃာပိုင်ပင်္စည်းမဵားကို လုယက်ဖဵက်ဆီူးခင်းမဵားကိုလည်း မင်းမိုက်စရိုက်ူဖင့် တရား လက်လတြ်ူပလြုပ်ခဲု့ကပၝသည်။
သံဃာတော်မဵားအပေၞ ရိုင်းပဵစြာ မတရာူးပမြူခဲ့မမြဵားအတကြ် ၀န်ခဵတောင်းပန်ရန် သံဃာတော်မဵား ၏ တောင်းဆိုခဵက်ကိုလည်း မထေမဲူ့မင် လဵစ်လဵြူပကြာ ပိုမိုဆိုးရြားသော အူပအြမူမဵား၊ စပ်ြစြဲေူပာဆို မမြဵားကိုသာ ဆက်လက်၍ူပလြုပ်လာသည်ကိုလည်း တြေႛူမင်ုကရပၝသည်။
သံဃာတော်မဵားကို ဖမ်းဆီြးိံပ်စက်ညငြ်းဆဲမမြဵား၊ထောင်သငြ်းအကဵဉ်းခဵမမြဵား၊သီတင်းသုံးရာ ကေဵာင်း တိုက်မဵားအတငြ်း မနေိုိံင်အောင် အမဵြိးမဵြိးသော ဖိအားပေူးခိမ်းေူခာက်မမြဵား၊ အသြား အလာခက်ခဲ အောင် မေူးမန်းစစ်ဆေးဟန်ႛတားမမြဵား စသူဖင့် ရဟန်းတော်မဵား သာသနာ့ကိင်္စမဵားကို စိတ်အေး ခဵမ်းသာစြာ လုပ်ခငြ့်မရအောင်ြေိာံင့်ယက်ြမမြဵာူးဖင့် သာသနာတော် အသရေညြိးံမြ်းမြေးမြိန်အောင်ူပလြုပ်နေစဉ်မြာပင် အူခားတစ်ဖက်မြာတော့ အာဏာရင်ြမဵား ဋ္ဌကြိးဆြဲရာကမည့် ဆရာတော်အခဵြိႛထံ ခဵဉ်းကပ်၍ ဘြဲႛထူးဂုဏ်ထူးမဵား အမဵြိးမဵြိးတီထင်ြဆက်ကပ်ူခင်း၊ သူဋ္ဌကီးဘုရား ရြာသားကောင်းမြူဖင့် သဒ္ဌၝတု စေတနာတု ကေဵာင်းတိုက်ဋ္ဌကီးမဵားကို ဆောက်လုပ်လဒြၝန်ူးခင်ူးခင်း၊ မိမိတိုႛအလိုကဵ တရား တော်မဵားကို ဟောုကာူးပစေူခင်း စသူဖင့် ဘာသာ သာသနိာံငြ့် ရဟန်းတော်မဵားဂုဏ်သိက္ခာကို ထိ ခိုက်ညြိးံမြ်းစေိုိံင်သော အူပအြမူမဵားကိုလည်း ပေၞပေၞထင်ထင်ူပလြုပ်နေုကပၝသည်။
ယခုကဲ့သိုႛသော အေူခအနေဆိုးမဵြိးအောက်၌ အာဏာရင်ြအစိုးရက ဋ္ဌကီးမြူးပလြုပ်မည့် စာမေးပြဲမဵားမြ ထက်ြပေၞလာမည့် ရလဒ်သည်လည်း စက္ကဘြဲႛလက်မတ်ြတစ်ခုထက် ပိုမို၍ မည်သည့်အဓိပဍ္ဎၝယ်မ္တွ ဆောင်ိုိံင်မည် မဟုတ်ဟု ယူဆမိပၝသည်။
ယခုအခဵိန်သည် သံဃာတော်မဵား၏ အစိုးရအပေၞ ၀ိနည်းကိံငြ့်အညီ ပတ္ဇနိက္ကဇ္ဆြနကံဆောင်ထားဆဲ လည်ူးဖစ်ပၝသည်။
အစိုးရက ဋ္ဌကီးမြးကဵင်းပမည့် စာမေးပြဲမဵားကို ၀င်ရောက်ေူဖဆိုခင်ူးဖင့် အစိုးရလုပ်ရပ်မဵားကို အားပေး ရာရောက်သည့်အူပင် အကဵဉ်းထောင်မဵားအတငြ်း အဖမ်းဆီး အြိံပ်စက်ခံနေုကရ၊ ပုန်းအောင်းတိမ်း ရြောင်ေူပးလြားနေုကရသော ဘုရားတပည့်တော်မဵား နောင်တော်ညီတော်မဵား၏ ဆင်းရဲဒုက္ခအ၀၀ ကိုလည်း မ္တွဝေ၍ ခံစား နားမလည်ပေးရာ ရောက်ပၝသည်။
သိုႛအတကြ်ူပည်တငြ်းမြ သမဂ္ဂရဟန်းတော်မဵား၏ စာမေးပြဲကို သပိတ်မြောက်ုကရန် ပန်ုကားခဵက်ကို ဘုရားတော်မဵာူးပည်ပရောက် ရဟန်းတော်မဵားအနေိံငြ့်လည်း သဘောတူထောက်ခံအားပေးပၝေုကာင်း၊ နောင်တော်ညီတော်မဵား တြေႛဋ္ဌကြံရင်ဆိုင်နေုကရသော အခက်အခဲမဵားကိုလည်း နက်နက် ရြိငြ်းရြိငြ်းနားလည် သဘောပေၝက်ပၝေုကာင်း အသိပေးလ္တွောက်ထားပၝသည်။
အစိုးရဋ္ဌကီးမြးကဵင်းပမည့်စာမေးပြဲမဵားကို သပိတ်မြောက်နေစဉ်အတငြ်း ဒေသအသီးသီးတငြ် အရပ်သား အဖြဲႛအစည်းမဵားက ဋ္ဌကီးမြးကဵင်းပနေသော စာမေးပြဲမဵားကို ၀င်ရောက်ေူဖဆို၍ မိမိတိုႛအရည်အသြေး မဵားကို ရပ်တန်ႛမနေစေအောင်ူမငြ့်တင်ူခင်း၊ ဘာသိာံငြ့်လူမဵြိးအကဵြိး ပံ့ပိုးကူညီိုံင်မည့် ဘာသာစကား သင်တန်းမဵား၊ ကနြ်ူပတြာသင်တန်းမဵား၊ ဟောေူပာစည်းရုံးမဆြိုင်ရာသင်တန်းမဵား၊ သမထ ၀ိင်္ပံနာဆိုင်ရာသင်တန်းမဵား၊ စာပေဆြေးြေိံးစကားဝိုင်းမဵား စုပေၝင်ူးပလြုပ်ုကူခင်း၊ မိမိတိုႛဒေသ အသီးသီးရြိ လူဋ္ဌကီးလူငယ်မဵားအတကြ် အသိဉာဏ်ဖြံႛ္ဘဖြိးတိုးတက်စေိုိံင်မည့် သင်တန်းမဵားဖငြ့်လစ်ြသင်ုကားပေုးကူခင်ူးဖင့် ဘာသာ သာသနာ လူမဵြိးကောင်းကဵြိူးဖစ်စေမည့် လုပ်ငန်းရပ်မဵား၌ ပိုမိုပူးပေၝင်း လုပ်ဆောင်ုကပၝရန်ကိုလည်း ရိုသေစြာလ္တွောက်ထားပၝသည် အရငြ်ူမတ်မဵားဘုရား။ ။
Posted by maungyit on November 30, 2007 in Op-Ed
မိုးမခ (ရန်ကုန်) –ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ
ရန်ကုန်တိုင်း ရဲဝန်ထမ်းမဵား နေရာေူပာင်းရြေႚ
ရန်ကုန်တိုင်း ထြေ၊အုပ် မြး ဦးလစြိုး စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵားရဲႚ မဵက်ြိာံသာပေူးခင်း ခံနေရ
အရင်ြဉာဏိသရ တရားခေမြဵားနဲႚ စစ်အစိုးရရဲႚ တုန်ႚူပန်မြ
ဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ နဲႚ ပတ်သက်ူပီး မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ ရဲႚ သတင်ူးဖည့်စက်ြခဵက် –
စက်တင်ဘာ အလနြ် စာပေစိစစ်ရေးရဲႚ ကဗဵြိာိံပ်ကပ်ြမမြဵား
ရန်ကုန်၊ိုိံဝင်ဘာ ၂၇ – ရန်ကုန်တိုင်းအတငြ်ူးမြိႚနယ်မဵားက ရဲဝန်ထမ်း အတော်မဵားမဵားကို နေရာအေူပာင်းအရြေႚ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အတည်မူပရြသေးတဲ့ သတင်းတပုဒ် ထက်ြနေပၝတယ်။ အရေအတကြ် အတိအကဵ မသိရသေးပေမယ့် ရဲဝန်ထမ်းအခဵြိႚေူပာင်းမိန်ႚမဵား လက်ခံရရြိူပီူးပီ လိုႚ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ဆိုပၝတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတငြ်းကူမြိႚနယ်ခဵင်းသာ ရြေႚေူပာင်ူးခင်ူးဖစ်ပေမယ့်၊ အခဵြိႚကို နယ်တေအြထိေူပာင်းပစ်မယ်လိုႚ ရဲအသိုင်းအ၀ိုင်းမြာေူပာနေုကပၝတယ်။ စက်တင်ဘာလ သံဃာတော်မဵား နဲႚ လူထုဆိံ္ဋူပပြဲမဵားအူပီးမြာ ရဲအရာရြိမဵားနဲႚ ရဲသားမဵားကို စစ်အစိုးရက ရည်ရယ်ြခဵက်ရြိရြိနဲႚ ခြဲထုတ်ပစ်တာလိုႚ ယူဆသူမဵားလည်း ရြိနေပၝတယ်။
ရန်ကုန်၊ိုိံဝင်ဘာ ၂၇ – စက်တင်ဘာလအတငြ်း သံဃာတော်မဵားနဲႚူပည်သူမဵားရဲႚူငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပပြဲမဵားကြိုိံမ်ိံငြ်းရာမြာ သံဃာတော်မဵားကို စြဲခဵက်မဵြိးစုံတင်ခဲူ့ပီး၊ စစ်အစိုးရဖက်က လ္တွောက်လဲခဵက်တြေ ပေးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း အထေထြေ အုပ်ခဵပ်ြရေး ဦးစီးဌာနမြး ဦးလစြိုးကို စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵားကေူမြာက်စားနေတယ်လိုႚ ထြေ၊အုပ် ၀န်ထမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းကေူပာဆိုနေုကပၝတယ်။
(ဗိုလ်မြုးကီးဟောင်း) လစြိုးဟာ ရန်ကုန်တိုင်း သံဃာနာယက ဆရာတော်ုကီးမဵားကို သံဃာမဵား အကဵင့်ပဵက်ူပားပုံ နဲႚ ဆူပူအောင် လပ်ြဆော်ပုံမဵားကို စြဲခဵက်တင် လ္တွောက်ထားပုံမဵားကိုိုံင်ငံပိုင် ရုပ်ူမင်သုံကား အစီအစဉ်မဵားကလည်း လငြ့်ထုတ်ပေးခဲု့ကပၝတယ်။ ဦးလစြိုးဟာ ကုလအထူးကိုယ်စားလယြ် ဂန်ဘာရီ ခရီးစဉ်အတက်ြလည်း တာဝန်ယူ စီစဉ်ခဲ့သူ တဦးလည်ူးဖစ်ပၝတယ်။
သံဃာတော်မဵားကို သိက္ခာခဵ၊ အူပစ်ဖိုႚမမြဵား ကဵြးလနြ်ိုံင်သောေုကာင့် ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵား အုကားမြာ ရေပန်းစားလပြေမယ့် ရဟန်းငယ်မဵားနဲႛူပည်သူမဵားအုကားမြာူပင်ူးပင်းထန်ထန် ဝေဖန်ူပစ်တင် ဆဲဆို ခံနေရသူလည်ူးဖစ်နေပၝတယ်။ ထြေ၊ အုပ် ၀န်ထမ်း အခဵြိႚကတော့ ယခုတုကိမ်ိုံင်ငံဝန်ထမ်းထူးခဋ္ဋန်ဆု ဆတ်ြခူးသူမဵား စာရင်းမြာ ဦးလစြိုး ထိပ်ဆုံးက ပၝလိာိုံင်တယ်လိုႚ ဆိုနေုကပၝတယ်။
ရန်ကုန်၊ိုံဝင်ဘာ ၂၇ – စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအူပီူးပည်သူမဵားအုကားမြာ အထူးရေပန်းစားနေတဲ့ သဲကုန်း သီတဂူ ဆရာတော် အရင်ြဉာဏိသရရဲႚ တရားခေမြဵားနဲႚ ပတ်သက်ူပီး စစ်အစိုးရကူမြိႚနယ် အေးခဵမ်းသာယာရေိးံငြ့် ဖြံႚူဖြိးရေး ကောင်စီမဵားက တဆင့် သူတိုႚသဘောထားကို ထုတ်ူပန်နေုကပၝတယ်။
ယခုသီတင်းပတ်အတငြ်း လမ်းမတော်ူမြိႚနယ် မ၊ယ၊က မြ ရ၊ယ၊က မဵားကို အစည်းအဝေးခေၞူပီး ဆရာတော်ရဲႛ အခေမြဵား ပဵံႚြိံႚနေတာကို သိရြိေုကာင်း၊ တရားခြေ နားထောင်မြေုကာင့်ူပည်သူမဵားကို ဖမ်းဆီးမြာ မဟုတ်ပေမယ့်၊ တရားခြေိံငြ့် ပတ်သက်ူပီိးိုံင်ငံတော်အုကီးအကဲမဵား အနေနဲႚ စိတ်မသက်မသာူဖစ်ရပၝေုကာင်း၊ူပည်သူမဵားအုကား ရ၊ယ၊က မဵားက သတင်ူးဖန်ႚပေးဖိုႚ ခေၞေူပာခဲ့တယ်လိုႚ အစည်းအဝေးတက်ခဲ့သူ တဦးက ဆိုပၝတယ်။
ူပည်သူမဵားရဲႚ ဆင်းရဲမြဲတေမအြနေနဲႚ ခံစားခဵက်မဵားကို ကိုယ်စာူးပြ ဟောုကားပေးမမြဵားေုကာင့် လူုကိက်ြမဵားနေုကတဲ့ တရားခေမြဵား အုကားမြာ အရင်ြဉာဏိသရ အခေမြဵားလည်း ပၝ၀င်နေပၝတယ်။
ဘန်ကောက်၊ိုံဝင်ဘာ ၂၈ – ယခုအခဵိန်မြာ ဆရာတော်ဟာူပည်ပ ခရီးစဉ် ထက်ြရြိနေပၝတယ်။ ယခင်အပတ်က အဂဿလန်ကို ရောက်ရြိခဲူ့ပီး ဆရာ၊ တကာမဵားနဲႚ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။ေူမာင်ူးမကေဵာင်းမြာ တည်းခိုခဲ့စဉ် ဆရာတော်အနေနဲႚ သာသနာ့မောဠိ ဆရာတော်မဵားနဲႚ ပတ်သက်ူပီးေူပာုကားခဲ့တာ ရြိမရြိကို မိုးမခက အတည်ူပြိုံင်အောင် စုံစမ်းနေပၝတယ်။
ကိုရီးယားကိုိုံဝင်ဘာ ၇ ရက်မြ ၁၆ ရက်အတငြ်း သြားခဲ့တယ်လိုႚ ခရီးစဉ်စာရင်း အရ သိရပၝတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၄ နဲႚ ၅ ရက်မဵားမြာူပလြုပ်မယ့် ထိုင်းဘုရင်ရဲႚ မြေးနေႚကို တက်ရောက်ဖိုႚ ဖိတ်ုကားခံရတဲ့ ဆရာတော်ုကီး ၉ ပၝးထဲမြာ ဆရာတော်လည်း ပၝတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။
ပၝကင်္စတန်မြာူပလြုပ်မယ့်ိုံင်ငံတကာဗုဒ္ဌဘာသာ ညီလာခုံကီးကိုမန်မာူပည်မြာ ကဵင်းပခဲ့စဉ်ကလို တာဝန်ပေးလာပၝကူပလြုပ်ပေးမြာူဖစ်ေုကာင်း ဆရာတော်က မိန်ႚုကားတယ် ဆိုတာကိုိုံဝင်ဘာူပည်တငြ်းထုတ် ဂဵာနယ်တေထြဲမြာ ဖော်ူပထားတာ တြေႚႛရပၝတယ်။ ပၝကင်္စတန်ိုံင်ငံရေး အေူခအနေပေၞ မူတည်တယ်လိုႚ ဆရာတော်က ဆိုတယ်လိုႚ ဂဵာနယ်သတင်းတေကြ ဖော်ူပပၝတယ်။ ထိုဂဵာနယ်မြာပဲ ဆရာတော်ုကီးကို စစ်တပ်က ထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတြေ မမနြ်ေုကာင်း ဆရာတော့် ဂေၝပကတေကြေူဖရငြ်းထားတာကိုလည်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။
ထိုင်ိးိုံင်ငံနယ်စပ်ကို တိမ်းရြောင်လာရတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တြေ လုံခြံရေးနဲႚ သီတင်းသုံးနေထိုင်ခငြ့်မဵားနဲႚ ပတ်သက်ူပီး ဆရာတော်ုကီးက ထိုင်းဘုရင်နဲႚ တြေႚခဲ့ခဵိန်မြာ တစုံတခုေူပာခဲ့၊ မိန်ႚပေးခဲ့ရင် ကောင်းမယ်ဆိုပီး ထိုင်ိးိုံင်ငံရောက်ူမန်မာအလုပ်သမားတေကြ ထင်ူမင်ခဵက်ပေးနေပၝတယ်။
ရန်ကုန်၊ိုံဝင်ဘာ ၂၈ – စက်တင်ဘာအရေးအခင်း အူပီး စာပေစိစစ်ရေးက အူဖတ်အတောက်မဵား ပိုမို တင်ုးကပ်လာရာမြာ ကဗဵာ စာမဵက်ြိာံတေမြာ အုကမ်းတမ်းဆုံးလိုႚ စာပေ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုနေုကပၝတယ်။
ကဗဵာ စာမဵက်ြိာံမဵား အူဖတ်အတောက်မဵားတာေုကာင့် မဂ္ဂဇင်းမဵားအနေနဲႚ စာပေစိစစ်ရေးကို စာမူမဵားတင်တဲ့အခၝ ကဗဵာ ပုဒ်ရေ အမဵားအူပား ထည့်တင်တာတောင် အလ္တွင်မမြီဘူးလိုႚ ဆိုကပၝတယ်။
ယခုထက်ြမယ့် Idea မဂ္ဂဇင်းရဲႚ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလထုတ်မြာ ကဗဵာ အပုဒ်ရေ ၁၅ ပုဒ် တင်ူပခဲ့ပေမယ့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလြိင်ရဲႚ ကဗဵာ တပုဒ်ကိုသာ စာပေစိစစ်ရေးက ဖော်ူပခငြ့် ပေးခဲ့ပၝတယ်။ ရယ်စရာ မဂ္ဂဇင်းကတော့ ၃၂ ပုဒ် တင်ူပရာမြာ ၄ ပုဒ်သာ ဖော်ူပခငြ့် ရခဲ့ေုကာင်း သိရပၝတယ်။
Posted by maungyit on November 29, 2007 in Local News Headlines
ဖိုးသံ(လူထု) – ၉၂ မြေးမိခင်သိုႚ
အဲဒီညကလေ … အမေ …။
မသဲလှပေမယ့် အသည်းကတော့ ကျင်နေတယ်
နောက် … အရာတော်
တနေရာပြီး တနေရာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်
သြော် … မြစ်ငယ်တောင် ကျော်သွားပါပေါ့လား …။
သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်တာလည်း မဟုတ်
ဒို့မှာ ရွေးစရာ မရှိလို့သာ
ဂရုစိုက်ကြပါကွာ … လို့။
တောင်တွေ … တောတွေ
ချောင်းတွေ … အင်းတွေ
လွှားကနဲ လွှားကနဲ … တသွားထဲသွား
အမေမှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ် ….
အရှေ့ကိုတဲ့ ထွက်ခဲ့တယ်” ဆိုတာလေ
နီသူတွေဖြူ … ဖြူသူတွေနီ
ဘ၀တွေ … ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတွေ
သွေကွဲရော … ရှင်ကွဲရော
နည်းသမို့လား အမေရယ် …။
မဟုတ်ဘူး လှေခွက်ချည်း မဟုတ်ဘူး
သားမြေးသစ်တွေနဲ့ လက်တွဲလို့ အမယ်အို့ ခြေလှမ်းမို့
ပါးအပြောင်ကြီး ပြောင်ခဲ့ရပါတယ် …။
၉၀ ကျော်ကြီး နှုတ်က
အမေလည်း ကျန်းမာအောင်နေတယ်” တဲ့။
Posted by maungyit on November 29, 2007 in Poems
ဒေၝက်တာလဏြ်းဆြေ – ၉၂ လူထု အမေသိုႚ
နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇
‘အမေ နေကောင်းလား’ လို့
‘ငါ့သားတို့ ဘယ်ရထားနဲ့ လာကြလဲကွဲ့
ထိုင်ကြ … ထိုင်ကြ’ တဲ့
ကြည်မွေ့တဲ့ အမေ့ အပြုံး
‘ အမေ … ဒီမှာ ဆရာမြေဇာ
ဟိုဘက်က ကိုချစ်ဝင်းမောင်’ လို့
အမေ အကုန်လုံး မြင်တာပေါ့’ ဆိုပြီး
‘ငါ့သားတွေ အရက် သိပ်မသောက်ကြနဲ့နော်’
‘အမေတို့ဘက်ကလူတွေ အသက်ရှည်တာကိုပဲ အမေမြင်ချင်တယ်’
ကိုဝင်းငြိမ်းနဲ့ဆို ဒီသုံးအုပ်ပဲ ရှိတာ
အမေ့ကို စာမူခ မပေးနဲ့နော်’ လို့
အကိုးအကား – သူႚရဲႚ ဘလောက်က ယူပၝသည် ၊ http://drlunswe.blogspot.com
အမေနဲႚ သား(သိုႚ) "သ" ၀ဂ်ကထာ
(အမေလူထုဒေါ်အမာ ၉၂နှစ်ပြည့် မွေးနေ့သို့ …)
သတ်ရဦးမယ် အမေ …။ ။
(ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)